Lamjung Khabar | काठमाडौं सहर, हेर्दा लाग्छ रहर
By Lamjung Khabar २०७७ साउन २२ गते बिहिबार २३:३७ PM
२० वैशाख, काठमाडौं । ‘काठमाडौंलाई कस्तो बनाउने ?’ अक्सर विकासे योजना र कार्यशालाहरूमा यही मुद्दा जल्दोबल्दो हुन्थ्यो । तर, कुरो अर्कै रहेछ । काठमाडौंलाई कस्तो बनाउने होइन, बरु काठमाडौंलाई कस्तो नबनाउने भन्ने कुरामा पो मन्थन गर्नुपर्ने रहेछ ।
अब काठमाडौं कस्तो बनाउने भनेर बहस छेड्नुभन्दा पनि उचित हुनसक्छ, काठमाडौं कस्तो नबनाउने ।
काठमाडौं जस्तो छ, त्यस्तै पो रहन दिने कि ? काठमाडौंलाई अब अरू कंक्रिटको बोझ नबोकाउने कि ? आफ्नै गतिमा बगिरहेका खोला-नालामा शौचालयको ढल नमिसाउने कि ?
चराचुरुङ्गीदेखि किराफट्याङ्ग्रासम्मलाई आश्रय दिइरहेका रुख–बिरुवाहरू नमास्ने कि ? खुट्टा पसारेर सुस्ताउन मिल्ने चौर एवं खुला स्थानहरू अतिक्रमण नगर्ने कि ?
हामी चुपचाप बसिदिँदा काठमाडौंको सौन्दर्य यसरी खुलेको छ, मानौं यो कुनै रुपवती नव-यौवना हुन् । कलकलाउँदो । भरभराउँदो । आफ्नै अवयवले सुशोभित !
माइतीघरबाट सिंहदरबारर्फको दृष्य